Iindaba -Yintoni inkqubo yokwenza ngokwezifiso ibhokisi yakho yesipho
Yintoni inkqubo yokwenza ngokwezifiso ibhokisi yakho yesipho
Ukupakishwa kwelebheli yabucala kuya kuba yinto eqhelekileyo kwezi ntsuku, ukusuka kwinkampani enkulu ukuya kwishishini elincinci, bonke bafuna ukuzenzela igama ngokwenkampani ngokupakisha kwayo. Njengoko ukupakisha kuyindlela elula, engabizi kwaye isasazeka ngokukhawuleza ukufezekisa injongo.
Namhlanje, njengeminyaka eli-10 yamava okupakisha kumzi mveliso, siza kwabelana ngezinye zeenkcukacha malunga nendlela yokupakisha ngokwakho?
Kuqala, ngokokuma kwemveliso kunye nexabiso ekujoliswe kulo, khetha ukuba uza kuyifumana na ibhokisi yekhadibhodi ebiza ixabiso okanye ibhokisi esemgangathweni eyenziwe ngesandla esemgangathweni ophezulu.
Namhlanje siza kuxoxa ngesiseko kwibhokisi yesipho ethandwa kakhulu kwezi ntsuku.
Emva koko, khetha ibhokisi oyithandayo. Eyona milo yamkelweyo iya kuba yibhokisi ephezulu kunye nesiseko, ibhokisi yedrowa kunye nebhokisi emile kwincwadi.
Emva koko, khetha izinto ezintle. Iphepha eligutyungelweyo elinokuprinta liya kuba lukhetho olusisiseko, kukho iphepha elininzi lobugcisa elinokucebisa ukhetho lwakho.
Emva koko, siya kugqiba ubugcisa kunye nokukhetha ubugcisa obufanelekileyo. Uncedo kunye nesitampu eshushu segolide lukhetho lobulumko. Apha ngezantsi kukho isalathiso sezinto eziqhelekileyo ezisetyenziswayo.
Ekugqibeleni, siya kwenza isampuli ngokuvumelana nazo zonke iinkcukacha uze uqhubeke imveliso ngobuninzi emva kokufumana imvume yakho.
Ukuqala, unokunxibelelana ngokulula nathi ngolwazi oluthe kratya ngokuthumela uphando lwakho ku-info@hanmpackaging.com